China Iziqhano zeglavu eziKhuselekileyo zomlilo abavelisi kunye nabathengisi | Joysun
Iziqhano zeGlavu yoKhuseleko yoMlilo yoMlilo
Inombolo yomzekelo: WCBD03
Igama Product: Iziqhano zomlilo eziKhuselekileyo zomlilo ezide
Isicelo: Umzi mveliso
Ukusetyenziswa: Umlilo kunye nobushushu ukumelana
Iphakheji: Iibini ezili-10 ibhegi enye ye-OPP
I-Keyworkds: I-Welding Heat Resistant, Sika i-Resistant, i-BBQ isikhuseli, indawo yomlilo.
Amandla okubonelela: Ngababini abangama-20 000 ngenyanga
Umbala weMveliso: mnyama + ngwevu
Isimo: 100% Entsha yeNtsha
Imilinganiselo: 40CM / 16 intshi ubude
Isixhobo: isikhumba seenkomo esikhethiweyo sokwahlula isikhumba, igwebu elipheleleyo kunye nethoni yangaphakathi yomqhaphu
NXIBA UMXHOLO:Ngokuqinelwa komtya weKevlar ukuze uqiniseke ngokhuseleko lwakho kunye nokuqina kokuqina kobushushu. Isithupha esomeleleyo kunye nesundu ekubambeni izandla xa usebenza ngobunzima obunzima okanye izinto ezibukhali.
UKUXHASANA NOKUSHISA:Ukukhetha igxalaba lokukhusela ukhuseleko lwesikhumba ekutshiseni izandla zakho xa unxibelelana nezinto ezinobushushu obuphezulu okanye umlilo. I-foam liner kunye ne-canvas cuff liner yokufudumeza ubushushu, ukufunxa ukubila kunye nentuthuzelo eyongeziweyo.
Uyilo oluguquguqukayo:Ukuqiniswa kwesundu kunye nephiko loyilo lwesithupha ukulungiselela ukuguquguquka okuphezulu. Kuthetha ukubamba izinto kwaye usebenze ngokulula.
Iiglavu zeJOYSUN ayisiyiyo kuphela iwelding, kodwa ikwasetyenziselwa eminye imisebenzi yasekhaya kunye neyasekhaya. Iiglavu zeWelding, iiglavu zomsebenzi, iiglavu zoKhuseleko, iiglavu zokuKhusela ubushushu, iiglavu zeBBQ, iiglavu zokukhempisha, Sika iiglavu zomthi.
Inkomo ekhethiweyo yegxalaba lokwahlula isikhumba
Mnyama + ngwevu
Ubungakanani obunye (40 * 13 * 2.5cm)
0.70kg / isibini
41 * 15 * 3cm / isibini, i-10pairs / ingxowa ye-opp
I-MULTI-Injongo: Ayenzelwanga ukuwelda kuphela kodwa ayanceda nakweminye imisebenzi emininzi kunye nemisebenzi yasekhaya. Iiglavu zewelding, Iiglavu zomsebenzi, iiglavu zemigodi, Iziqhano zeGloves Resistant, Sika iiglavu Resistant, iiglavu zomlilo, iiglavu zeBBQ
Egqithileyo Iibhanti ze-PVC ezijikeleziweyo ze-Jersey ezigqityiweyo zigqibile iiglavu zamadoda
Okulandelayo: Iiglavu zeCrinkle Latex Rubber Hand Coated Work Work
Iiglavu zomsebenzi wesikhumba ezide
Iiglavu zomqhubi wesikhumba i-DPAS iiglavu
Iiglavu zesikhumba zomqhubi weDCAS
luhlaza okwesibhakabhaka ngomlilo omde kunye nobushushu bokugcina ubushushu ...
Iiglavu zasebusika zeCAPL368 yesikhumba
Iiglavu zesikhumba zeWCBR03 ezibomvu zewelding eziqinisiweyo
Cotton Canvas Knit Iziqhano Work ne ...